Shiinaha Wasakhda caaga Pyrolysis Warshad Plant iyo soosaarayaasha | LYBH
Nidaamka daryeelka kahortaga (waxaa bixiya macmiilka)
Ka dib markii caagagga qashinka ay fuuqbaxeen, la qalajiyey, la jajabiyey, iyo habab kale, waxay heli karaan cabir ku habboon.
Balaastiiyadaha qashinka ah ee horay loo sii daayay waxaa loo qaadayaa haanta wareejinta.
Nidaamka pyrolysis joogto ah
Caagagga qashinka waxaa si isdaba joog ah loogu quudiyaa fal-falaha pyrolysis iyada oo loo marayo quudiyaha loo yaqaan 'pyrolysis'.
Qalabka shidaalka ee kuleyliyaha wuxuu inta badan isticmaalaa gaaska guban kara ee aan guban karin oo ay soo saarto pyrolysis ee caagaga qashinka, iyo gaaska qiiqa heerkulka sare ee la soo saaray ayaa lagu qasan yahay gaaska qiiqa dib loo rogay si loo bixiyo kuleylka loo baahan yahay.
Nidaamka kala soocida qaboojinta saliida iyo gaaska
Ka dib marka saliida iyo gaaska laga soo saaray pyrolyzer-ka joogtada ah la qaboojiyo oo la kala saaro, saliida shidaalka waxay galeysaa haanta saliida aruurineysa waxaana loo sii qaadayaa aaga taangiga mashiinka saliida, iyo gaaska aan guban karin ee gubi kara nidaamka nadiifinta gaaska.
Nidaamka nadiifinta gaaska guban kara
Gaaska guban kara ee laga helay pyrolysis waxaa lagu sifeeyaa nidaamka nadiifinta gaaska guban kara waxaana lagu dhex geliyay taangiga xasilinta cadaadiska iyadoo la raacayo ficilka qalabka xakamaynta cadaadiska iyadoo loo marayo haanta qubeyska biyaha. Gaaska aan la isku koobi karin ka dib marka la nadiifiyo waxaa loo diraa qeybta kululaynta, iyo kuleylka ka dhashay gubashada waxaa loo isticmaalaa pyrolysis-ka taayirada qashinka.
Nidaamka adag ee ka shaqeynta shidaalka
Wax soo saarka adag ee heerkulka sare ee ay soo saarto gaaska joogtada ah ee loo yaqaan 'pyrolysis gas' waxaa loo qaadaa silo badeecada adag ee loo yaqaan 'conveyor' ka dib marka la qaboojiyo heerkulka aaminka ah ee qaboojinta biyaha heerarka badan leh.
Ka dib marka la soo qaboojiyo gaaska qiiqa dib loo warshadeeyay, wuxuu galaa munaaraddii ka saarida boodhka iyo urta iyo munaaraddii nadiifinta gaaska hawada. Ka dib nadiifinta heerarka badan, sida nidaamka ka saarista boodhka beraha korantada iyo nidaamka ka saarista urta UV, waxay gaaraysaa heerka qiiqa.
Khadka wax soo saarku wuxuu qaataa nidaamka xakamaynta PLC / DCS iyo kormeerka gudbinta xogta ee daruuraha si loo fuliyo kormeerka waqtiga dhabta ah ee node kasta oo looga soo diro daruurta qunsuliyada. Barta kontoroolku waxay xaqiijin kartaa dildilaaca nabdoon ee taayirka qashinka caqliga leh Isla waqtigaas, shaqooyinka helitaanka xogta, xisaabinta, duubista, foomamka warbixinta daabacaadda iyo soo-saarista hore ee badbaadada waxay xaqiijineysaa amniga, xasilloonida iyo hawlgalka joogtada ah ee khadka wax soo saarka.
Wax soo saarka joogtada ah ee otomaatiga ah, tikniyoolajiyad casri ah, tayo saliid wanaagsan;
2.Fully si toos ah, heerkulka sare, slag shaabadaysan, ilaalinta deegaanka iyo nadiif ah oo aan boodh.
Qalabka derbiga ka hortagga ee u gaarka ah wuxuu xaqiijin karaa soosaarka joogtada ah ee alaabta ceeriin ee gaarka ah.
Awood wax qabad oo weyn, awood maarayn maalinle ah ilaa 50-100 tan. Shidaal la'aan, gaaska aan-uumiga aheyn ee ay soo saarto pyrolysis ayaa dib loo helay si loo taageero gubida.
5. Ilaalinta deegaanka iyo wasakheyn la'aan, (waxay la kulmi kartaa heerka guud ee daaweynta qashinka halista ah) boodhka badeecada patent-ka ee qaranka, ka qaad boodhka gaaska aashitada qiiqa iyo boodhka.
6.Fudud in la shaqeeyo oo la badbaadiyo foosha.
Taayirada qashinka, cinjirka qashinka, balaastigga qashinka, qashinka loo yaqaan 'acrylic', dhoobada, qashinka guryaha
3.Sida shidaalka loo heli karo ee loogu talagalay ka-shaqeynta pyrolysis
Maya Nooca Soo saarida saliida
1 PVC / PET Ma sifayn karo
5 Xarig caag ah 80%
7 Bac caag ah 50%
Hore: Warshadda qashinka Pyrolysis
Xiga: Qashinka Sii Daaya Pyrolysis Plant
30-40tpd Pyrolysis Qalabka joogtada ah
Pyrolysis otomaatig ah
Qalabka Pyrolysis otomaatiga ah
Taayirada Qashinka Shiinaha Si joogto ah Qalabka Pyrolysis
Warshad Pyrolysis Taayiro Sii Joogta ah
Qashinka Sii Daaya Qalabka Pyrolysis
Qalabka Pyrolysis Bjl5-30tpd Chinese
Qalabka Pyrolysis ee Taayirada
Nidaamka Dib-u-warshadaynta Taayirada
Dib-u-warshadaynta Taayiro Shidaal
Qalabka Taayirada Gawaarida
Qalabka Taayirada Pyrolysis
Pyrolysis-ka Qashinka Caaga ah
Qashinka Pyrolysis-ka Qashinka
Nidaamka Dib-u-warshadaynta Taayirada Qashinka
Qalabka Daaweynta Qashinka
Qashinka Taayirada / Dib-u-warshadaynta Qalabka Pyrolysis
Taayirada Qashinka Si joogto ah Qalabka Pyrolysis Qalabka Shiinaha
Taayirada Qashinka Pyrolysis Mashiinka Warshad
Waxaa burburi doona jajabka taayirka ka dib marka suunka la qaado, miisaanka suunka, qalabka wax lagu kala qaado, iwm cadaadiska xun ee nidaamka pyrolysis joogto ah iyada oo loo marayo pyrolysis, nidaamka ka dib marka heerkulka falceliska wajiga gaaska uu yahay 450-550 ℃ iyadoo lagu jiro xaalad faaruq ah falcelinta, soo saar saliida pyrolysis, kaarboonka madow, silig pyrolysis iyo gaaska guban kara, gaaska guban kara kala saarida qeybta soo kabashada saliida iyo gaaska kadib marka aad gasho foornada qaraxa kulul, dhamaan wax soo saarka ...
Dufcaddii Pyrolysis Plant, Warshad Pyrolysis joogto ah, Mashiinka Dib-u-warshadaynta Caaga, Mashiinka Dib-u-warshadaynta Taayirada Qashinka, Sifee caag ah, Taayirada Pyrolysis,